ADRETTA BARADHO: SHARAXAAD IYO BEERISTA NOOCYO AAN QABYO AHAYN - BARADHADA
Goobidda iyo daryeellidda noocyo baradho ah Adretta
Lama geli karo kuleyl xagaaga oo aan baradho lahayn. Waxaan u adeegsan karnaa khudraddan si aan u karino cuntooyin badan, waxaa inta badan laga helaa miiska. In maqaalka ah waxaan kuu sheegi doonaa waxa baradho ah Adretta waa, sharaxaad ka mid ah kala duwan, soo bandhigo sawiro iyo dib u eegis.
Astaamaha iyo sharaxaadda kala duwanaanta
Waxyaabaha kala duwan ee "Adretta" waxay u muuqdeen qiyaastii 20 sano ka hor sababtoo ah shaqada ay u samaysay jarmalka Jarmal. Caadiyan, noocyo baradho leh jaale huruud ah ayaa loo tixgeliyaa calafka, laakiin ka dib muuqaalka noocyada noocaas ah, wax kasta ayaa isbeddelay.
"Adretta" ayaa ku riyaaqay sumcaddii weyn ee suuqa, iyada oo midabka huruudka ahna aan loo tixgelinin calaamad muujinaysa noocyada dhirta.
Waa muhiim! Ma aha lagama maarmaan in la beero barandhada dhulka oo leh digada - tani waxay saameyn doontaa dhadhanka, iyo sidoo kale inay horseedi karto dhaawaca digriiga by bakteeriyada iyo dirxiga ku nool carrada sida.
Tilmaamahan soo socda ayaa u dhigma fasalka:
Khudaarta cagaaran ayaa leh maqaar, jaale ah oo yar.
Indhuhu waa kuwo aad u yar.
Jidhka waxaa lagu matalaa cirbad jaalaha ah ama jaale ah.
Dalagga xididku wuxuu leeyahay qaabka wareegga ah.
Baradhadu waxay ka kooban yihiin 16.1-17% istaarijin.
Celceliska miisaanka ee xididka waa 130-140 g.
Noocyada xayawaanka "Adretta" waxay isku xiran tahay, inay la socdaan. Xaashiyaha waxay yeelan karaan cabbirro kala duwan - laga bilaabo dhexdhexaad ilaa ballaaran, oo ku rinjiyee midab cagaaran.
Waxaa jira dad badan oo ku faafaya corolla cufan. "Adretta" - mid ka mid ah wakiilada noocyada xilliga dhexe.
Goosashada ugu horreysa waxaa la samayn karaa 2 bilood ka dib marka la furo. Ka dib 70-80 maalmood, digriiga si buuxda u weyn.
Dhirta ayaa iska caabisa abaarta, waxay leedahay dhalid sare. Iyadoo 1 hektar ah waxaad ka qaadan kartaa ilaa 45 tan oo baradho ah.
Ma taqaanaa? Miraha baradho waa miro iyo daboolo ay ku jiraan solanine. Waa walax sun ah oo sidoo kale u muuqda digriiga cagaaran ee jiifa.
Darajada aan saameyneynin dhibicda heerkulka ah, waa wax aan la iloobi karin qoyaan badan.
Caag kasta waxaa loo isticmaali karaa beerashada baradhada, laakiin si joogto ah u buufinta, waxa aad si weyn u kordhin kartaa dhalidda.
Miisaanka 5-dhibcood, noocyada kala duwan waxay heleen qiimeynta ugu sareysa ee dhadhanka. Hilibka baradho waa jilicsan, wuxuu leeyahay jajab yar. Daaweynta kuleylka waxay ka dhigeysaa mid adag. Kala duwanaantu waa habboon tahay samaynta baradho la shiiday, jajab.
"Adretta" waa baraf badan oo caan ah waqtigayaga, maadaama ay leedahay sifooyin aad u jilicsan.
Si aad u hesho goosashada qani ku ah, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid sifooyinka iyo dhibaatooyinka kala duwan ee kordhaya noocyada kala duwan. Waxaan ku talineynaa in aan la socono iyaga.
Wixii beerto baradho ah, waxaa fiican in la doorto meelo qorrax leh oo iftiin leh. Haddii aad ku beeranayso dalagga xidid leh meel mugdi ah, afkoda ayaa bilaabi doona in ay kor u kacaan, iyo digriiga waxay noqon doonaan kuwo yaryar iyo gnarled.
Laguma talinayo in lagu beero noocyo kala duwan oo ku yaal aagga oo leh biyaha dhulka hoostiisa. Masaafada waa inay ahaataa ugu yaraan 1 mitir.
Wixii beerto waxay u qalantaa xulashada aagga leh loamy ama ciidda duurjoogta ah, taasoo hubin doonta qoyaanka ugu badan iyo hawada hawada ee nidaamka xididka iyo digriiga baradho.
Waa muhiim! Qoyaan ciidda si fiican ka hor hilling. Haddii aan la sameyn, hilling ma keeni doonto lacagta la filayo.
Sababtoo ah ciidda ciidda, waxaa jira isku-uruurin istaarijin ah.
Xeerarka iyo shuruudaha degitaanka Adretta
Warshad kasta waa in la beeraa wakhti cayiman waxayna u hoggaansamaan inay dejiyaan xeerar ku saabsan fulinta nidaamkan. Baradhadu waa ka reeban yihiin.
Bataato beereedka waxaa badanaa la qabtaa dhammaadka Abriil - Maajo. Xilliga saxda ah wuxuu ku xiran yahay xaaladaha cimilada, waa in:
heerkulka joogtada ah;
si fiican u diiriyo ciidda.
Si loo hubiyo in midho goosasho caafimaad leh, waxaa habboon in si taxadar leh loo diyaariyo walxaha beerto. Horraantii Abriil, waxaa lagama maarmaan ah in lagu dhajiyo digriiga meel fiican oo shidan leh qoyaan ah 45-60%.
Heerkulka qolka noocan ah inta lagu jiro maalinta waa inuu ahaado qiyaastii 17-20 ° C, habeenkii - 8-10 ° C 3 toddobaad ka dib, digriiga ayaa bilaabi doona in ay soo iibsadaan biraha cagaaran iyo Gagaash. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu rusheeyo biyo iyo daboolo bireed. Foomkan, waa inay seexdaan toddobaad kale.
Ma taqaanaa? Dalagga ugu horreeya ee rootiga, kaas oo koray meel bannaan, wuxuu ahaa baradhada. Dhacdadani waxay dib u dhacaysaa 1995.
Ka hor inta aanad bilaabin, ma noqon doonto mid aad u adag in la isticmaalo talooyinka soo socda:
Si aad u jeestaan ​​digriiga, waa inaad ku ridaan xal this: 5 litir oo biyo ah, 10 g of boric acid, 6 g of baker sulfate, 1 g of permiranate.
Si aad u hesho biqimaad degdeg ah, waa in aad baradho ku ridaan xal of mid ka mid ah daroogooyinka la soo jeediyey: "Epin", "Prestige", "Vermishtim".
Si loo kordhiyo qiyaasta dalagga iyo kordhinta macruufka cufnaanta ee khudaarta, waxaad ku saydhaa baradhada dambaska.
Marka la raaco talooyinka ku saabsan diyaarinta qalabka beeraha ee beerto, waxaad xaqiijin doontaa goosashada qani ku ah.
Talaabada koowaad waa in la qodo godad, qoto dheer oo aan ka dheerayn 10 cm. Masaafada u dhaxaysa 40 cm waa in la eegaa masaafada u dhexeysa safka - waa inay ahaataa ilaa 60 cm.
Waa muhiim! Ma ku dhaqi kartid barandhada ka hor intaadan u dirin kaydinta - si dhakhso ah ayuu u dhacaa oo u bilaabaa inuu biqlo.
Si aad uga cabsiisid kabaha, ku rid dhar isku qasan oo ceel kasta leh, ka dibna ku rid bataatooyinka godadka iyo dabooli kara ciidda. Ka dib marka la soo dhameeyo, waxaad u baahan tahay inaad dhulka hoos u dhigto adoo adeegsanaya rake - tani waxay ka hortagi doontaa uumiinka qoyaanka ee qoyaanka.
Sida loo daryeelo Adretta
Warshad kasta, waa miro ama khudaar, waxay u baahan tahay daryeel. Waxaanu kuugu soo bandhigi doonaa si aad u barato xeerarka daryeesha baradho ah ee kala duwan ee aynu ka fikirayno.
Hilling iyo dabacsanaan
Hilling waa mid ka mid ah nidaamyada muhiimka ah ee qasabka ah ee daryeelidda baradhada. Thanks to isaga, qoyaan waa la keydiyaa, samaynta degdeg ah ee digriiga cusub ayaa dhacaya, ciidda waxaa lagu kobciyey oksijiinka.
Hilling waxaa la sameeyaa labo jeer xilli. Marka hore waxaa la sameeyaa marka caleemaha ugu horreeya ee 10 cm oo kor u kaca ah ay ka muuqdaan dhulka, labaadna waa marka ay duurka u koraan ilaa 20 cm.
Waxaa lagu talinayaa in ay ku dhuftanto geedka subixii ama fiidkii. Haddii baradho lagu beeray jawi kulul oo qallalan, marka waraabinta joogtada ah aysan suurtogal ahayn, hilling lama fulin, maadaama habsocodyada ay sababi karaan digriiga inay kululaadaan. Xaaladdan oo kale, dabacsanaanta dhulka u dhexeeya safafka ayaa la sameeyaa - isla mar ahaantaana, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro caws iyo jebin miisaanka qalalan si loo xaqiijiyo is dhaafsiga hawada iyo kobaca degdegga ah.
Inkasta oo ay iska caabbiyaan noocyada kala duwan ee abaarta, ha u oggolaanin ciidda in ay qalalaan. Si kastaba ha ahaatee, dhirta uma baahna inay buuxiyaan. Waa lagama maarmaan in si joogta ah dhulka loogu hayo. Celceliska hal baadiyaha wuxuu u baahan yahay 3-4 litir oo biyo ah.
Waraabinta waxaa lagu fulin karaa iyada oo lagu rusheeysanayo ama la marin karo grooves gaar ah.
Waxaa lagu talinayaa in la sameeyo dharka ugu sarreeya fiidkii ama subaxii, isla mar ahaantaana waxay ka wanaagsan tahay in la doorto maalmo aan lahayn hawo qallalan oo leh jawi qallalan.
In jiritaanka caleemaha daciifka ah iyo dhuuban iyo caleemo aan caafimaad lahayn, waxaad u baahan tahay inaad sameyso qaybta koowaad ee bacriminta. Waxaad u baahan doontaa 10 litir oo biyo ah, taas oo aad u baahan tahay inaad ku milmto 1 tbsp. qaadada miraha. Mid ka mid ah baadiyaha wuxuu u baahan yahay 500 g oo bacriminta ah.
Marka burooyinku ay bilaabaan inay muuqdaan caleemaha, quudinta labaad ayaa la qabtaa. Waxay kicin doontaa ubax. In 10 litir oo biyo ah waxaad u baahan tahay inaad milixiso 3 tbsp. malqacadaha ash iyo 1 tbsp. qaaddo of sulfate potassium. Wixii hal keyn ayaa u baahan 0.5 litir oo quudin ah.
Dharka saddexaad waxaa la fuliyaa marka baradho ubaxyada. Waxay dardar galin doontaa kordhinta koritaanka digriiga. Hal baaldi ayaa kala diri jiray 1 koob oo ah mullein ama shimbir shimbireed, ka dib markii 2 tbsp ah lagu daro xalka. malqacadaha superphosphate. Under baadiyaha waxaa la keenay 500 g.
Si aad u hesho goosashada wanaagsan, waxaad u baahan tahay inaad si habboon u daryeesho baradhada: cawska sariirta, cawska, boogta.
In kasta oo xaqiiqda ah in noocyada kala duwan ee "Adretta" ay u adkaysato fayraska, cudurada iyo cayayaanka ayaa saameyn kara. Tixgeli cudurrada iyo cayayaanka weerarka barafka, oo kuu sheegi sida loola macaamilo.
Dheecaan danbe. Iyada oo horumarinta cudurka, caleemaha iyo jirriduhu waxay ku xanuunsadaan dhibco madow, dhirta dhirta iyo dhogorta. Digriiga waxaa lagu daboolaa kallana. Daaweyn, Kuproksat buufin (3 litir 1 hektar) ama xal copper. Si looga hortago dhacdada cudurka, laguma talinayo in la beero baradho si gooni gooni ah oo ka mid ah kuwa kale ee bidixda ah, sidoo kale waa mid ku haboon in la kordhiyo qiyaasta daawada sulfate ee muddada dhayidda.
Macroscopic. Baro cawlan oo qallalan waxay u muuqdaan caleenta, cayayaanka iyo digriiga. Si loola dagaalamo waa lagama maarmaan in lagu daweeyo dhirta Kuproksat ama Bordeaux isku dar ah. Si looga hortago muuqaalka cudurka aan la beeray baradhada ku xiga tamaandhada, ha qodin dhul aad u hooseeya xilliga dayrta.
Jeex. Lagu soo bandhigay foomka qallalan qoyan iyo qoyan digsiyada. Si looga hortago, waxaa lagama maarmaan ah in la dhigo 45 g of ammonium sulphate halkii 1 mitir oo dhul ah ka hor beerashada, daaweeyo abuur abuur leh xalinta foomamka.
Aphid Waxaa lagu gartaa waxyeello caleemaha iyo caleemaha, iyadoo natiijada dhirta dhirta iyo qallajinayso. Si aad u dagaalanto inta lagu guda jiro xilli sii kordhaya ayaa ku buufinaysa. Isticmaalay: xalka "Phosbecid", dib-u-habaynta qoryaha iyo xashiishka ama xashiishka. Wixii ka hortagga dhacdo, waxaa lagu talinayaa in ay ku beeri dill iyo dhir u dhow barandhada.
Colorado duqsiyo. Cuncada caleenta ee dhirta, afkoda, taas oo keenaysa dhimashada baadiyaha. Sida ugu dhakhsaha badan dirxiga soo muuqan, waxaa lagama maarmaan ah in lagu buufiyo xalka Bitoxibacillin 4 jeer (toddobaadkii). Si looga hortago baahida loo qabo in si joogto ah u baaro geedka, soo qaado dirxiga oo iyaga ku burburiyaan xal milix ah.
Hothouse Whitefly. Astaamaha ay ku qabato caleemaha nafaqooyinka. Inta lagu jiro xilliga sii kordhaya waa in la buufin "Phosbecid". Wixii ka hortag ah laguma talinayo in lagu beero baradho ku xiga yaanyada.
Ma taqaanaa? Miisaanka barafka ugu weyn ee ku qoran buugga Guinness Records waa 8 kiilogaraam.
Kadib markaad ogaato waxa ay tahay "Adretta" baradhada, waxay ku baratay dabeecada kala duwan iyo dib u eegista, waxaad si badbaado leh ugu socon kartaa beeritaanka rootiga rootiga ee ku yaala gurigaaga.